Store ကို | ပြည်ပရှိဘို့ဗီဇာ + လုပ်ငန်းခွင် + CV ကိုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ
သင်ဟာတစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့ဘဝက start စေချင်သလား?
Store ကို - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ဗီဇာ + လုပ်ငန်းခွင် + CV ကိုအတူ Store မှာ။ သင်တို့အဘို့စံပြ destination သည်ကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု. !. ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်ကနေစကားပြောနိုင်ငံခြားသားများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဖြစ် အိႏၵိယ လည်းပဲ ပါကစ္စတန် နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ။ ယခုကြှနျုပျတို့ထိုသူအပေါင်းတို့အဘို့အအံ့သြဖွယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်မှာကြည့်ပါ။ တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်, သငျသညျအလုပျရဖို့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီပေးအပ် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့လမ်းညွှန်။ အောက်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇာအတူတူအလုပ်နှင့်အလုပ်အာမခံန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏စံပြတိုင်းပြည်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုတွင်, သငျသညျနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်နေထိုင်နေနှင့်အလုပ်လုပ်ဘို့ထိပ်တန်း-rated ဦးတည်ရာကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဥပမာ, သငျသညျယျောဒနျမွအဖြစ်ဆော်ဒီအာရေဗျ, အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Store ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင်တို့အထဲ၌အသက်ရှင်ရန်သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံအကြောင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ဗီဇာရှေးခယျြသငျ့သညျသငျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏အဖွဲ့အနေဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ထိုအခါအပြုသဘောဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကသင်၏နေရာပြောင်းရွှေ့ဖြစ်စဉ်ကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်, သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီထံမှဗီဇာရွေးချယ်ဝယ်ဖို့ရှိသည်။ ထိုအခါကျွမ်းကျင်သူဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအဖွဲ့သည်သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာစေရန်ကူညီနိုင်ရန်လိုအပ်သောအရာကြွင်းသောအရာလုပ်ပါ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှဗီဇာ။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူကြိုက်အများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုရန်ဖိတ်ခေါ်ဖို့ Option တစ်ခုရှိနိုင်ပါသည်စကားပြော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားကူဝိတ်, ဆော်ဒီအာရေဗျ, United Arab Emirates လေဗနုန်တောနှင့်ပင်ပါလက်စတိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်ကူညီပေးနေသည်။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်သင်လူကြိုက်အများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုနှင့်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းမှဗီဇာရရှိရန်နှင့်သင့်မိသားစုနှင့်အတူစွန့်ခွာရန်ရှာနေလျှင်စကားပြောနှင့်သင့်ဆိုပါစို့။ သင်တစ်ဦးအလုပ်အခွင့်အလမ်းကိုဖမ်းရန်ဒူဘိုင်းနှင့်အတူထို option ရှိလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားဖြစ်ကြပြီးလျှင်ဒါကြောင့်သင်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်အခွင့်အလမ်းကိုဖမ်းရန်ရှာဖွေနေပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီပါကစ္စတန်ဆော်ဒီအာရေဗျကနေလူတွေကိုကူညီနေပါတယ်။ ထိုမှတပါး, ဒူဘိုင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကူဝိတ်နှင့်လေဗနုန်အဖြစ်ပင်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်။ ကျနော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အစံအလုပ်အကိုင်များနှင့်အပြာရောင်-ကော်လာအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်နှင့်ဖမ်းပြီးအားလုံးကိုအတူတကွလူတွေကိုကူညီနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သင်ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံတွင်ဗီဇာအခွင့်အလမ်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သောအလုပ်ရှာသူဖြစ်လာရန်သလောက်ကျနော်တို့လုပ်နိုင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုကူညီဒီမှာပါ။ သငျသညျကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်းဖြစ်ကြောင်းထိပ်တန်း rated နိုင်ငံတွေထဲကနေရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်စရာရှိသည်လိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ဤရွေ့ကား, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုနေရာချခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးဗီဇာပေးနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ရုံဗီဇာအမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါလှည်းရန်သင့်ဗီဇာထည့်ပါ။ ထို့နောက်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုပါစေ။ ပြီးတော့သင့်ရဲ့ရှေးခယျြ destination သို့ပျံသန်း။ အဲဒီအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ရှာသူဖြစ်လာအားလုံးပါပဲ။